Nei ChaizvoTarget uye CoTweet Inoita Sense | Martech Zone
Nei ChaizvoTarget uye CoTweet Inoita Sense
Chitatu, Kurume 3, 2010 Mugovera, Mbudzi 28, 2015 Douglas Karr
Pakutanga ndakakatyamadzwa nemashoko, ExactTarget uye CoTweet? Email ne Twitter? Ivo vaiita kunge hama dzekure kwandiri, ini handina kunyatso kuitora.
Manheru ano ndataura naChris Baggott, mubatanidzwa we ExactTarget uye ikozvino CEO we Kuumbiridza Blogware. Chris akatadza kutaura zvakakwana zvinhu zvakanaka nezve kufamba, akafara zvisingaiti kuna Scott Dorsey… uye akatsanangura kuti zvine musoro sei:
Email ne Twitter hazvina kufanana. Ivo vaviri vanosarudza-mukati uye Push-maitiro ekutaurirana nzira.
CoTweet ndeye manejimendi manejimendi manejimendi yeTwitter, ExactTarget inyanzvi yekushambadzira email Iwo mabhizinesi akwezverwa kune yega yega tarisiro kune mumwe.
CoTweet uye iyo Yemagariro Midhiya Lab kupa Silichibage Valley kambani ine Silicon Valley kuoneka.
CoTweet inobvumira ExactTarget kuti inyurure muSocial Media pasina njodzi hombe kana mari yekutenga imwe yemamwe mafambisirwo enharaunda kunze uko.
Iyo yakanaka nzira yeExpactTarget yekunyudza zvigunwe mumasocial media. Vamwe vanogona kupokana kuti email yaive yepakutanga magariro svikiro… ini handikwanise kupokana nazvo. Ndiri kutarisira kuona zvinoitika zvinotevera neExpactTarget uye ndiri kufara pachezvangu kuti CoTweet ikozvino yave nemidzi muIndipolis! Ndiri kufarawo kuti hazvizo rebranded ExactTweet! 🙂
Ndiri kufarira zvakare Scott Dorsey! Scott ndiye wandakabvunzurudza naye kuExactTarget kumashure mumazuva ekutanga - uye haana kumborasa kuda kwake, kushingairira uye kufara kwekambani. Pasina mubvunzo ichi chingori chitsauko chekutanga mune dzakawanda dzinouya! Makorokoto ExactTarget uye CoTweet!
Tags: cotweetchaizvoscott dorsey
Mar 4, 2010 pa 11: 40 AM
Ongororo inonakidza, Doug. Unoona sei ET ichiita mari neCoTweet?
Mar 4, 2010 pa 6: 38 PM
Indasitiri yeemail, sezvaunoziva, ine yakachinja zvakati wandei pamusoro pemakore mashoma apfuura. Imi vanhu ndemumwe wevashoma avo vakaona kuti vashambadzi havadi kuwedzera imwe sevhisi - vanoda kudzikisa masevhisi avo uye kurerutsa mazano avo. Isu tinoramba tichikanda migero mitsva kwavari - uye izvi zvinoda otomatiki, uye maturusi akareruka.
Ini handifunge kuti yakawanda nezve ExactTarget kugadzira mari yakawanda pane kudzivirira iyo mari yavari kugadzira parizvino. Iko kune mukana wekugadzirisa uye kukudziridza kutaurirana madhibhodhi kune vashambadzi kubata zvese zvinobuda, mvumo-yakavakirwa kutaurirana. Kana ExactTarget ikasashanduka, ivo havasi kuzotsigira kukura. Iyi inhanho munzira iyoyo.
Mar 9, 2010 pa 8: 42 AM
Kubvumirana. Isu takadanawo zvakasununguka munharaunda yeatekiniki pano "Silicon Prairie." 🙂
Iko kutenga kweToTweet kunonakidza kwazvo uye kana matekinoroji auya pamwechete, tichaona chimwe chinhu chisina mumwe munhu anogona kupa maererano nehukama hwekutaurirana.